Ukuphupha ii-Eardrums ▷ ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
I-timpani sisixhobo somculo esifana negubu kwaye ine-teapot egqunywe lulusu okanye ive. Ubume bekomityi buyahluka ngokwesixhobo kwaye inokuba sisetyhula phantse ibe emacaleni. Ngokungafaniyo negubu, inowuthi yetimpani inokuhlengahlengiswa. Oku kwenziwa ngokugubungela ulusu okanye, kwimeko yegubu lokunyovwayo, kunye nenyovane enoxinzelelo ngelixa ugwayimba.
I-timpani isetyenziswa ikakhulu kwi-orchestra yeklasikhi kwaye ibonelela ngeendlela ezimangalisayo zomculo. Kodwa kutheni sidlala igubu emaphupheni? Umfanekiso wephupha ufuna ukusixelela ntoni ngathi?
1 Uphawu lwephupha «timpani» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «timpani» - ukutolika kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «timpani» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «timpani» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokwetoliki yamaphupha, nabani na obetha isigubhu nzima kube kanye emaphupheni abo usongela ukutsala umdla kubomi bokwenyani ngenxa yesandi sabo esinengcwangu. Nangona kunjalo, kwiimeko ezininzi kunzima.
Ukuba ujonga umfanekiso wephupha "timpani" ngokubanzi, uhlala urhoxisa Izaziso phakathi. Nangona kunjalo, ezi zihlala zingabukeki kwindalo. Ukuba ubetha i-kettlebell ngokwakho, oku kungabonisa ukuba unento ebalulekileyo oza kuyithetha xa uvusa ubomi.
Isizathu sokubethwa kwegubu ephupheni sinokulala kuhlobo oluqhelekileyo lokulala. Kuba abo bathuleyo kwaye bathuleyo badla ngokuviwa. Ngee-bangs, nangona kunjalo, unokuziva ngqalelo khuseleka kwabanye. Ukulala, oku kunokuthetha ukuba kufuneka uliphakamise ngokuzolileyo ilizwi lakho rhoqo ukuze uve.
Ukubethwa kwegubu ephupheni nako kunokuba nye Isilumkiso zimele. Umntu ophuphayo unokuhlala enesifiso esomeleleyo sokuqinisekiswa. Uhlala efuna ukuba liziko lokuqwalaselwa, ngaphandle kwamajelo eendaba. Kwinzondelelo yakho egqithileyo yokuqwalaselwa, mhlawumbi awazi ukuba awusoloko ubonisa le ndlela yokuziphatha ngendlela elungileyo. Iphupha le-timpani lingathanda ukulumkisa iqela elinomdla kwaye limenze abe mnye ukuzazi ngcono Ngokukhawuleza. Kungenxa yokuba ukuba awuyitshintshi indlela oziphethe ngayo, kungekudala uza kuziva ulilolo.
Uphawu lwephupha «timpani» - ukutolika kwengqondo
I-timpani kukuchazwa kwengqondo kwamaphupha njengophawu lwe ukuhlalisana ijongiwe. Ngokukodwa xa iphupha libetha igubu, le ntetho inokudluliselwa phantse kubuntu bakho. Ngamaxesha athile, nangona kunjalo, ngenxa yokuxakeka kwendalo, uhlala ethambekele ekuzibaleni umfanekiso-mfanekiso wakhe, ongasoloko uhleli kakuhle kuye wonke umntu. Abantu abahlobo abasenyongweni bayazi malunga nezi ntlobo zingafakwanga kwaye banokuyiphatha kakuhle. Kwimeko yabantu ongabaziyo, nangona kunjalo, umntu ophuphayo unokubonakala ngathi unqumle umda kwaye uyazithanda.
Atención Kuyacetyiswa xa abanye bedlala igubu ephupheni. Oku kwalatha kubantu kubomi bamaphupha abasoloko bekhwaza kakhulu, kodwa kwimeko engxamisekileyo beba uxanduva ngezizathu ezingenamsebenzi.
Uphawu lwephupha «timpani» - ukutolika kokomoya
Ukuba iphupha le-timpani litolikwa ukusuka kumbono ogqithileyo, oku kufanekisela kwelinye icala inyaniso kaThixo. Kwelinye icala, umfanekiso wephupha ulumkisa xa uphupha ngokuchasene uhlala unika inkolo ecacileyo, kuba amaxesha amaninzi ukuqonda kwenyani kulele ithoni ethambileyo zifihliwe.